China Runjin © Krunt ™ -G4 Ice Cream Na-ejuputa Igwe Ntupụta na Nrụpụta | Runchen
Na-ejuputa ice cream, sorbet na mmiri ice ngwaahịa na cones, iko na nnukwu igbe nke ụdị dị iche iche, ọdịdị na nha.
A na-eme ka iko ndị ahụ, cone ma ọ bụ nnukwu ihe dị iche iche na-agbasa n'otu n'otu site na nchịkọta na-enye ihe ma debe ha na lamellas, dị njikere maka ndochi.
Ijuputa ice cream, sorbet ma ọ bụ mmiri mmiri na-ewere ọnọdụ site na ma ọ bụ onye na-ewepụta oge, mpịakọta mpịakọta ma ọ bụ nzacha extrusion. N'ihe banyere ice cream, a na-etinye usoro ịkpụ.
Cochọ mma nwere ọtụtụ viscous ma ọ bụ ihe siri ike dị iche iche ga-ekwe omume ma enwere ọtụtụ ihe ịchọ mma nhọrọ maka Runchen Krunt-G4.
Enwere ike ịhọrọ ọrụ mkpuchi dị iche iche site na ọtụtụ usoro ndị dịnụ, dabere na atụmatụ nke ngwaahịa a, yana ikpuchi okpomọkụ site na iji mpempe akwụkwọ amachibidoro.
Mgbe akara na ikpuchi ngwaahịa a na-ebuli elu na lamellas ma bufee ya na eriri ebufe ebufe. Sistemụ njikwa akpaaka, dịka igwe nnyefe na-ebe, dị.
Runchen Krunt-G4 wuru ya na igwe anaghị agba nchara. A haziri igwe eji emeju ihe iji zute ụkpụrụ ịdị ọcha kachasị elu, gụnyere etiti mepere emepe nke na-ezere ọnyà mmiri ma na-enye ohere maka nhicha nke eriri. A na-etinyekwa ihe ntanetị maka nhicha lamella dịka ngwá ọrụ ọkọlọtọ.
Lubrication n'efu, igwe anaghị agba nchara ebu ígwè na pitch nke 70mm ebu lamellas nke na-ndokwasa na n'agbụ site "ọsọ ọsọ" kposara maka mfe mgbanwe-ihe.
A na-etinye ọdụ ụgbọ elu niile dị n'elu okporo ụzọ, na-enweghị idozi oghere nke na-enye ohere maka ịdị mfe na ngwa ngwa nke ọdụ ahụ na-enweghị iji ngwaọrụ.
Ihe ndozi, ihe ndozi na inyeaka gụnyere ngwa nozzles, hoses, ọdụ ụgbọ ala wdg. Ezubere maka njikọ dị mfe na ngwa ngwa maka mgbanwe ngwaahịa dị mfe na nhicha dị irè. Enwere igwe di iche iche na ntaneti abuo di iche iche. Igwe ahụ nke nwere ihe ndebiri nke 140mm bụ maka ngwaahịa pere mpe ebe igwe nwere ngbanye nke 210mm nwere ike ijikwa nnukwu ezinaụlọ na nnukwu igbe. Achọghị ka ịgbanwee agbụ mgbe ị na-agbanwe ọkwa dị iche iche nke lamellas.
Ugboro a na-achịkwa moto na-eme ka igwefoto na-arụ ọrụ iko ma ọ bụ ihe nkesa na ihe nkedo. A na-ejikọ usoro mmega ahịrị nke ndị na-ebugharị lamella n'ụzọ dị isi site na isi draịva site na usoro ntụgharị.
Ihe encoder na-enye PLC mgbaama maka njikwa ziri ezi nke mmegharị arụ ọrụ nke ikuku.
Runchen Krunt-G4 na-achịkwa site na sistemụ njikwa PLC etiti. PLC na-eme ka o kwe omume inweta njikwa ziri ezi na mgbanwe dị mfe n'etiti ngwaahịa. PLC na-enye ohere maka mbido ma mechie ma mechie ya, ma a kwadebere ya na ebe nchekwa data 2MB nke na-enye ohere ịme ngwaahịa dị iche iche tupu emee ya.
Ngwaahịa data na-egosipụta na akara aka panel ka mfe ọrụ na nlekota.
Abụọ Ikuku na agụụ System
Maka ihe ndị dị ọcha, a na-eme ihe niile dị ọkụ na-egbochi mmebi, ihe na-enweghị mmanu. All valves na-electrically arụ ọrụ oche valves na ha na-wuru n'ime a igwe anaghị agba nchara kabinet n'elu igwe.
Agụụ chọrọ maka iko, akpa na mkpuchi mkpuchi na-enweta site na venturi valves.
Ngwaọrụ mgbakwunye igwe
Ebumnuche toro ogologo ma na-akwụsi ike
A na-agbatị ogologo igwe ahụ ruo 5m iji nyekwuo ohere maka ịrụ ọrụ ntuziaka na ọnọdụ ndị ọzọ maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ. Nkwado nke akụrụngwa igwe na-abawanye site na 4 iberibe 6 iberibe nke na-ewusi ike nke igwe maka na-agba ọsọ steadier.
Mbanye Servo Motor maka Ijuju Ọdụ
Siemens S7-300 PLC kwadebere na igwe akụrụngwa, enwere ike ịgbakwunye igwe ụgbọ oloko maka ọdụ ụgbọ mmiri na-enweghị mgbakwunye ọzọ. Mmeghari nke ndochi bu ihe omume site na oru iji megharia uzo di iche iche nke cam, enwere ike ichekwaa ma weghachite data. Nke a na - eme ka mgbanwe ngwaahịa na ihe ọhụrụ dị mfe.
Njikwa okpomọkụ nke Chocolate System
Heating system na okpomọkụ akara usoro maka ma chocolate spraying na topping usoro bụ ọkọlọtọ imewe iji zere chocolate araparawo na ala ihere okpomọkụ.
Ugbo mkpuchi mkpuchi
A na-etinye mgbakwunye mkpuchi mkpuchi mkpuchi iji melite nkwụsi ike nke mkpuchi mkpuchi iji hụ na ngwaahịa dị mma.
Enwere ike ịnye igwe eji eme ihe Runchen Krunt-G4 dị iche iche maka akụrụngwa, cone ma ọ bụ akpa. Edepụtara ụkpụrụ dị iche iche maka ụdị ngwaahịa ọ bụla n'okpuru:
Nnukwu akpa na-ejuputa
Nnukwu / akpa dispenser
2 ekpomeekpo ice ude doser na servo mbanye
2uzo valves Sauce topping
Ogwe 2 nke ebe mgbapụta
Akwụkwọ cone pleating
Conveyer maka cone
2 uzo uzoMkpuchi dispenser
Mkpịsị aka na ịpị
Conveyer maka iko
Na mgbakwunye na akụrụngwa ọkọlọtọ, ọtụtụ ụdị nhọrọ nhọrọ dị maka ịkesa, jupụta na ịchọ mma. Nke a na - enyere ọtụtụ ngwaahịa aka imepụta.
Doser maka ekpomeekpo abuo nke ihe oriri
Doser maka ekpomeekpo abuo nke ude mmiri nke ikuku
Doser maka ice ude nke twister ndochi
Doser maka ripple ice ude nke twister ndochi
Doser maka ice cream na ntinye
Dechọ Mma unit Pensụl filler
Na-ata ata dispenser
O-belt conveyer Buru & ebe ngwaọrụ
Extrusion dịanyā gụnyere ihe ọkụkụ maka ịchacha mmiri Nhọrọ kpo oku maka ịcha waya
Ngwaọrụ na-agbanwe agbanwe maka extruder
Cochọ mma unit Pencil filler Volumetric filler Liquid doser
Cocoa ntụ ntụ doser wingta chịngọm dispenser Okpomọkụ akara - pre-cut foil Dome mkpuchi dispenser Cup mkpuchi dispenser
Lid unscrambler maka nonstackable lids Nonstackable mkpuchi n'usoro ngwaọrụ
Mkpuchi spinner codbọchị ntinye tinyekwa conveyer
Họrọ ma dowe ngwaọrụ
Doser maka 2 ekpomeekpo ice ude nke yiri ndochi
Chọ mma unit
Okpomọkụ akara - pre-cut foil Dome mkpuchi dispenser Cup mkpuchi dispenser
Mkpuchi spinner codbọchị nzuzo
Iji hụ na arụmọrụ igwe, a na-atụ aro ka ị jiri akụkụ mbụ nke nwere ike ịnye iwu ka ọ dị mfe dịka akwụkwọ ntuziaka akụkụ ahụ. Iji nyere ndị ahịa aka ebuli ngwaahịa ngwa ahịa, Runchen Krunt-G4 na-ejuputa igwe iji rụpụta ọtụtụ akụkụ dakọtara na ahịa ahụ, gụnyere 140mm pitch lamellas, ebe ọrụ, akụkụ akụkụ, akụkụ ụgbọ ala dịka ọmụmaatụ sprocket na yinye, kpo oku mmewere na wdg.Ma a na-atụ aro ya iji gosi na Runchen tupu i jiri akụkụ ndị dakọtara iji zere mmebi ọ bụla igwe.
Mba nke ụzọIndexing pitch Ahụkarị mmepụta (PC / h) Nke nke ụgbọ ojii Mechanical ọsọ (ọrịa strok / min) Max. cone ngwaahịa size Cone lamella Mba.
Rektangulu ngwaahịa: mm
inch rektangulu cup lamella
Max. eb. elu: Iko
4 ụzọ140 / 5,5 ”1030030
Lazọ 3140 / 5,5 ”760030
Lazọ 2140 / 5,5 ”520030
Lazọ 3280/11 ”480020
Lazọ 2280/11 ”340020
1 uzo280/11 ”210020
Ngwongwo chocolate Mpịakọta akpa Dosing volume per unitMkpuchi atingchọ Mma 14Litre （3.7 US Gals） × 2 2-6ml (0.07-0.20 fl. Oz.)4-8ml (0.14-0.28 fl. Oz.)
※ Ikike nwere ike ịdabere n'ọtụtụ ihe, gụnyere ọdịdị na olu nke ngwaahịa ahụ yana ntinye na ụzọ akara.
Arụ ọrụ mgbali Oriri
Main moto Servo moto dịanyā ịtụgharị
Tinyekwa belt conveyer kpo oku
ọkọlọtọ ọkọlọtọ ọkọlọtọ ọkọlọtọ
Enweghị mmanụ, ọdịnaya mmiri ≤ 2.0g / cu.m 6bar (87 psi)2.5 cu.m / min 3 × 380V / 50Hz
Standard Lamellas nhazi
[A1] 140 pitch 4 uzo gburugburu ngwaahịa [B1] 140 ipolowo 4 uzo nke anọ
[A2] 140 pitch 3 uzo gburugburu ngwaahịa [B2] 140 ụzọ ngwaahịa 3 larịị
[A3] 140 uzo uzo abuo nke ahia [B3] 140 pitch ngwaahịa 2 ụzọ rectangle ngwaahịa
[A4] 280 pitch 3 uzo gburugburu ngwaahịa [B4] 280 ipolowo 3lanes rektangulu ngwaahịa
[A5] 280 pitch 2 uzo gburugburu ngwaahịa [B5] 280 pitch 2 okporo ụzọ rectangle ngwaahịa
[A6] 280 pitch otu uzo gburugburu ngwaahịa [B6] 280 ngwaahịa 1 larịị rektangulu ngwaahịa
※ [A1] lamellas bụ ndabara nhazi maka ọkọlọtọ igwe, ọrụ ụlọ ọrụ onwem na-dakọtara na [A1] lamellas.
※ 140mm ma ọ bụ 280mm lamellas dịkwa dị ka arịrịọ ndị ahịa si dị.
El 210mm pitch lamellas na yinye dị dị ka ndị ahịa rịọrọ
Cone & Cup dispenserArụghị arụ ọrụ, enweghị mmebi nke ihe eji ekpuchi.
Presser na Chocolate raygbaEdo atom, oru oma olu akara. Heating na nloghachi akara na sprayer nozzles zere chocolate rapaara.
Mbanye Servo maka Ndochi SistemLow vibration na mkpọtụ, mmanu free. Nanị gbanwee usoro data site na nchịkwa nchịkwa maka ngwaahịa ọhụụ ọhụụ na-enweghị ọnụahịa ọzọ.
Nke gara aga: Runjin © Krunt ™ -Z12 Z12 Ice Cream Rotary Na-ejuputa igwe
Osote: Runjin © Krunt ™ -N50 Ice Cream Igwe Igwe